Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana Eoropeana » Noraran'ny Vondrona eropeana ny Amerikanina mpandehandeha
Airlines • Airport • Aviation • Vaovao Mafana Eoropeana • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovaom-panjakana • Vaovao momba ny fahasalamana • Vaovao • People • fanorenana • tompon'andraikitra • Safety • Tourism • Fitaterana • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • malaza ankehitriny • Etazonia Vaovao Vaovao • Vaovao isan-karazany
Vondrona eropeana hamerenana amin'ny laoniny ny famerana ny dia amin'ny Amerikanina
Ny vondrona eropeana dia nanala an'i Etazonia tamin'ny lisitry ny fitsangantsanganana azo antoka noho ny fiakaran'ny tranga COVID-19 vaovao.
Ny EU dia hampiato ny dia rehetra tsy ilaina amin'ny mpitsidika amerikana.
UE hamerina ny fameperana ny dia noho ny firongatry ny US COVID-19.
Ireo mpizahatany ao amin'ny EU dia mbola voarara tsy hiditra ao Etazonia.
Ny tompon'andraikitra ao amin'ny EU dia nanolo-kevitra ny hampiatoana ny dia tsy ilaina rehetra avy any Etazonia satria nisesisesy ny tranga amerikana COVID-19.
The vondrona Eraopeanina dia nanoro hevitra ireo firenena mpikambana ao aminy mba hanala an'i Etazonia, Israel, Libanona, Montenegro ary Makedonia avaratra amin'ny lisitry ny firenena azo antoka amin'ny dia tsy ilaina, noho ny fiakaran'ny aretina virus corona vaovao any amin'ireo firenena ireo.
Ny fanambaràn'ny filankevitra eropeana androany dia mitaky fanolorana ho an'ireo firenena mpikambana miisa 27 ao amin'ny bloc, izay mitazona ny fiandrianam-pirenena amin'ny lafiny ara-teknika. Mivadika ny tolo-kevitra tamin'ny volana jona hanamorana ny famerana ny mpandeha amerikana.
Tsy voafatotra io tolo-kevitra io, midika izany fa avela hanapa-kevitra ny firenena tsirairay raha mbola maniry ny hamela ireo mpitsidika amerikana manana porofon'ny vaksiny, fitsapana ratsy na quarantine.
Ny EC dia manavao ny tolo-keviny momba ny dia isaky ny tapa-bolana, mifototra amin'ny ambaratongan'ny aretina COVID-19. Hodinihina "Azo antoka" ny firenena iray dia mila manana tranga vaovao tsy mihoatra ny 75 isaky ny mponina 100,000 14 mandritra ny XNUMX andro.
Araka ny angom-baovao farany, 152,000 19 ny tranga amerikana vaovao COVID-XNUMX isan'andro tamin'ny herinandro lasa teo, mitovy amin'ny isa hatramin'ny faran'ny volana Janoary.
Ny fiakarana farany indrindra dia ny fanenjehana ireo hopitaly sy ireo mpiasan'ny fahasalamana. Iray amin'ny iray amin'ireo tobim-pitsaboana dimy no nahatratra 95% farafaharatsiny.
Niakatra koa ny taham-pahafatesana - mahatratra maherin'ny 1,000 isan'andro. Ny antsasaky ny amerikana rehetra dia vita vaksiny tanteraka amin'ny COVID-19. Ireo olona tsy vita vaksiny dia manodidina ny 29 heny no mety hampidirina hopitaly miaraka amin'ny COVID-19 kokoa noho ireo izay vita vaksiny tanteraka.
Mandritra izany fotoana izany, mpizaha tany avy amin'ny EU - ary ny ankamaroan'ny sisa amin'ny tany - dia voarara tsy hiditra ao Etazonia amin'ny fameperana napetraka tany am-piandohan'ny areti-mandringana.
Tamin'ny fiandohan'ny volana Aogositra, ny fitondrana Biden dia honohono fa mieritreritra ny fepetra takiana amin'ny vaksiny hanokatra indray ny sisin-tany, saingy tsy mbola nisy naheno izany soso-kevitra izany.
Tamin'ny fiandohan'ity volana ity, ny filohan'ny vaomiera eropeana Ursula von der Leyen dia nilaza fa ny tsy fahampian'ny fifandimbiasana dia tsy avela "hisintona mandritra ny herinandro".